आटा खान हुने मैदा खान नहुने किन ? |
Home स्वास्थ्य/टिप्स आटा खान हुने मैदा खान नहुने किन ?
उस्तै स्वभावका खानेकुरामा यस्तो भिन्नता हामीले माथि उल्लेख गरिएका खानामा मात्रै होइन, यसबाहेकका अरु खानामा पनि पाउन सक्छौं । जस्तै, सेतो चामलको भातभन्दा हल्का खैरो रंगको भात स्वास्थ्यको लागि उपयुक्त मानिन्छ । पाउरोटीमा पनि सेतोभन्दा खैरो रंगको पाउरोटी नै स्वास्थ्यको लागि उचित मानिन्छ ।
यसको भित्रको विज्ञान के हो त ? हामीले पोषणविद् सञ्जय महर्जनसँग यसको उत्तर सोधेका थियौं । महर्जनको उत्तर यस्तो छ ।
सामान्यतया कुनै पनि खानाले हाम्रो शरीरमा कति मात्रामा शक्ति प्रदान गर्छ र त्यो खानाबाट रगतमा कुन गतिमा शक्ति प्रवाह हुन्छ ? भन्ने आधारमा खानाको गुणस्तर निर्धारण गरिन्छ । अर्थात्, कुनै खाना खाँदा छिट्टै नै भोक लाग्छ, तर कुनै खाँदा लामो समयसम्म लाग्दैन ।
हामीले खाएको खानाबाट जति शक्ति प्राप्त हुन्छ, त्यो रगतमा कुन मात्रामा गएको छ ? त्यसले निर्धारण गर्छ । धेरै तीव्र गतिमा शक्ति रगतमा गएको छ भने त्यसको शक्ति छिटो सकिन्छ र छिट्टै भोक लाग्छ, शक्तिको प्रवाह सुस्त गतिमा छ भने यसले ढिलासम्म शक्ति प्रवाह गरिरहेको हुन्छ र ढिलासम्म भोक लाग्दैन । यही आधारमा नै हामीले कस्तो खाना खाने र कस्तो नखाने भनेर निर्धारण गर्छौं ।
यसलाई अर्को हिसाबले विश्लेषण गर्दा हाम्रो शरीरलाई चाहिने कार्बोहाइड्रेड तीन किसिमको हुन्छ, सामान्य, जटिल र फाइबरयुक्त । सामान्य कार्बोहाइड्रेडयुक्त खानामा ह्वाइट राइट्स, मैदा, फलफूल लगायत पर्छन् । यस्ता खानेकुराले रगतमा छिटोछिटो ग्लुकोज प्रवाह गर्छ ।